लकडाउन ब्युँताउने आइसोलेसन
बाह्रखरी - वर्षा महर्जन बुधबार, फागुन १२, २०७७
तस्बिरहरु : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी
काठमाडौं । ढोकाबाट छिर्नेबित्तिकै कालो रङ लगाएको मधुरो कोठाको बायाँ र अगाडि भित्तामा इन्स्टाग्रामको फर्म्याटमा ठूलाठूला पोस्टर टाँगिएका छन् । पोस्टरमाथि कैलाश के. श्रेष्ठ लेखिएको छ । त्यसको ठीकमुनि विभिन्न स्थानका खाली सडकको बीचमा सेतो सानो गोलो घेराभित्र मास्क लगाएको शीर नभएका मानव शरिर ठिङ्ग उभिएको छ । फोटोको वर्णनमा तल लेखिएको छ, “आइसोलेसन सिंहदरबार २०२०, साइज ३६×३६ इन्च, मिडियमः फोटोग्राफी, मूल्य : ५० हजार” उनको यो प्रस्तुतिले हामीले फोनमा कुनै इन्स्टाग्रामको फोटो हेरिरहेको महसुस गराउँछ ।
यसरी नै हरेक पोस्टरमा काठमाडौंको फरकफरक ठाउँको सडकमा कोही पीपीई लगाएका स्वास्थ्यकर्मी त कतै आमनागरिक त्यही घेराभित्र उभिएको देख्न सकिन्छ ।
त्यस्तै कोठाको दायाँतिर बौद्ध धर्ममा हुने माने (घुमिरहेको गोलो चक्र) मा राजनीतिक व्यंग्य चित्रण गर्न खोजेका छन् । एकछेउमा रातो र सेतो रङको कुर्सीमा कोट, दौरासुरुवाल र कालो टोपी, मास्क लगाएका दुई मानव शरीर दुई छुट्टाछुट्टै कुर्सीमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको पृष्ठभूमि खाली सडक र छेउछेउमा भवनहरू छन् । अनुहारविना बनाएका ती शारीरिक व्यक्तित्वहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालकै प्रतिनिधि हुन भनेर भन्न अवलोकनकर्तालाई गाह्रो हुँदैन ।
त्यसको ठीकपछाडि कालो बादल लागेको जस्तो उजाड पृष्ठभूमिमा एक व्यक्ति भरिएको झोला बोकेर कतै गइरहेको देख्न सकिन्छ । “त्यो झोलामा उसको जिन्दगी छ । ऊ यो सहर छाडेर कतै गइरहेको छ । कोरोनाले सब ठप्प भएर आममानिस कहाँ जाने के गर्ने भन्ने अन्योल हुँदा देश हाँकिरहेका नेताहरू भने कुर्सीका लागि लडिरहेका थिए । यो वास्तविकताको व्यांग्यात्मक प्रतिनिधित्व हो ।”
त्यस्तै अर्को भागमा ऐनामाथि रातो रङले प्रश्न चिह्‍न खडा गरिएको छ । त्यो चारैवटा हाम्रो जीवनमा चलिरहने चक्र हो । राजनीतिक कुराले हरेकको दैनिकीमा असर गरिरहेको छ । भने हामीले गर्दा नै त्यो राजनीतिक अस्थिरता पनि पैदा भएको हो । ती प्रतिनिधिहरू पनि हामी जनताले नै छानेर पठाएका हौं । त्यसैले यसको एक-अर्कासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने कुरा कलाकार श्रेष्ठले देखाउन खोजेका छन् ।
यी सबै घटनालाई मिक्समिडिया प्रयोगगरी कलामा उतारेका कलाकार कैलाश के. श्रेष्ठ आफ्नो कलाबारे यसरी वर्णन गरिरहेका थिए । उनले डिजिटल फोटो र पेन्टिङको समिश्रण गरेर यी कला तयार पारेका हुन् । यी हरेक फोटोमा भएका मास्क, सुनसान सडकको बीचमा एकजना मात्रै उभिएको मानव शरीरले एक्लोपन अर्थात् आइसोलेसनमा दर्साउँछ ।
यो पाटनढोकास्थित ढोकैमा क्याफेको भ्यान गो ग्यालरी ‘खोलाः अ साइकल अफ लाइफ’ शीर्षकमा जारी कला प्रदर्शनीमा कलाकार श्रेष्ठको ‘आइसोलेसन’ शीर्षकमा राखिएको प्रदर्शनी हो ।
मंगलबार हामी उनको कला प्रदर्शनीमा जाँदा उनी हरेक कुराको केही न केही कारण हुने बताइरहेका थिए । अझ कलाकारले प्रयोग गर्ने रङदेखि स्थानलगायत सानोभन्दा सानो कुराको पनि आफ्नै कारण हुने र त्यसले अवलोकनकर्तालाई कुतूहल पैदा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । जारी कला प्रदर्शनीमा उनले प्रयोग गरेका स्थान, शिरविनाको शरीर र कलालाई प्रस्तुत गर्न लिएको इन्स्टाग्रामको फर्म्याटमा पनि आ-आफ्नै कारण छन् ।
उनले इन्स्टाग्रामकै सहायता लिनुको कारण उनले यही शीर्षकमा यी कलाहरू लकडाउनको समयमा आफ्नै इन्स्टाग्राम पेजमा भर्चुअल प्रदर्शनी गरिसकेका हुन् । यसको अर्को सम्भावित काराण भनेको यस प्रदर्शनीका क्युरेटर उजेन नोर्बु गुरुङ र कलाकार श्रेष्ठको भेट पनि यहि इन्स्टाग्रामले नै गराएको थियो ।
ग्यालरीको सेटअप र श्रेष्ठका कलाले साँचै हामीलाई फ्ल्यासब्याकमा लैजान्छ । कोरोना महामारीबाट बच्न हरेक व्यक्ति घरभित्रै एक-अर्कोको समीपबाट टाढिएर बस्नुपरेको त्यो भयवाह समयमा हामीलाई फेरि एकपटक पु्र्‍याएको अनुभव हरेक अवलोकनकर्ताले गर्नेछ ।
साथै त्यसबेलाको तितो यथार्थ पनि उनका कलाले चित्रण गर्न खोजेका छन् ।
उनका यी कलाहरू लकडाउनको समयमै तयार भएका थिए । लकडाउनको समयमा सबैजना आ-आफ्नै घरमा बन्द थिए । सधैं मान्छे र गाडीको चहलपहल हुने सडक, गल्ली, चोकहरू सुनसान थिए । मानवबिनाको सडक, चोकहरू कस्तो थियो भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका केही तस्बिरहरूले बेलाबेला देखाउँथे । तर कलाकार कैलाश भने मानवबिनाको त्यो सडक, चोकको प्रत्यक्षदर्शी हुन चाहन्थे । “सबै मानिसहरू घरभित्रै आफैले क्रियट गरेको डिफाइन स्पेसभित्र बसिरहेका बेला त्यो सोसल स्पेसहरू कस्तो भयो होला भन्ने कौतहुल्ता थियो,” कैलाश थप्दै भन्छन्, “ती ह्युमनलेस स्पेसेसहरू एक्सपिरियन्स गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो ।”
एक कलाकारका हिसाबले ती ऐतिहासिक ठाउँहरू उनी कलामार्फत अभिलेखमा राख्न चाहन्थे । ऐतिहासिक यो हिसाबमा कि ती ठाँउहरू भोलि फेरि त्यसैगरी शून्य हुँदैन थियो । स्थिति सामान्य भएसँगै त्यहाँ पहिलेजस्तै चहलपहल सुरु भइहाल्थ्यो । मानिसहरू यसरी एक-अर्कासँग दूरी कायम गरी बस्दैनन् ।
यसका लागि उनले धेरै फोटो पत्रकारहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए । तर सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएनन् । तर एक विदेशी फोटोग्राफर साथीले उनको कुतूहलता बुझेर उनको स्कुटर ड्राइभरका रुपमा कलाकार श्रेष्ठलाई ती मानवबिनाको स्थान हेर्न लगे ।
हाल प्रदर्शनीमा राखिएका स्थानका फोटोहरू उनी आफैंले लकडाउनमा खिचेका हुन् । भने त्यहाँ भएका अर्धशरीरहरू केही उनका हुन् त केही उनले मिक्समिडियामार्फत पछि बनाएका हुन् ।
कलाकार श्रेष्ठका अनुसार यो कोरोनाको समयमा मात्रै नभई हामी अरुबेला पनि आइसोलेसनमै छौं । हामी सामाजिक सन्जालमा (भर्चुअल संसारमा) एक-अर्कासँग टचमा छौं तर फिजिकल टचबाट बाहिर छौं । यी सबै कुराहरूमा गहिरो अन्तर्क्रिया हुन जरुरी भएको श्रेष्ठ जोड दिन्छन् ।
अनुहार र शरीरविनाको शारीरिक बाहिरी लुगा मात्रै लगाएको मानव आवरणको पनि आफ्नै सिम्बोल छ । हामीले हरेक कुरालाई सतहमा मात्रै हेरिरहेको उनी बताउँछन् । कोरोनाजस्तो जटिल र डरलाग्दो महामारीका बेला जनताहरू के गर्ने के नगर्ने, के खाने भन्ने कति अन्योलमा हुँदा देशका राजनीतिक प्रतिनिधिहरू भने पदको खोक्रो आवरण ओढेर जनताको लागि सोचिरहेका छौं भन्दै देखावटी गरेर भित्रभित्र भने त्यही पद बचाउन र कुर्सीकै पछि लागिरहेको तितो यथार्थलाई श्रेष्ठले व्यांग्यात्मक रुपमा चित्रण गरेका छन् ।
कलाको आयोजनामा २८ कलाकारको एकल कला प्रदर्शनी ‘खोलोः अ साइकल अफ लाइफ’ सिरिजमा भइरहेको कला-प्रदर्शनी फेब्रुअरी १२ देखि अगस्त २७ (सात महिना) सम्म जारी हुनेछ ।
हरेक कलाकारको एक-एक साता प्रदर्शनी जारी हुनेछ । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो एकल कला प्रदर्शनी भएको क्युरेटर गुरुङले दाबी गरेका छन् । “यसरी हरेक कलाकारको एकल कला प्रदर्शनी त्यो पनि यति लामो समयसम्मका लागि भएको सायद यो पहिलोचोटि नै हो । तर यसको मतलब हामीले बबाल नै गर्‍यो भन्ने होइन ।” क्युरेटर गुरुङ अगाडि थप्छन्, “हामीले त युवा कलाकार जो सधैं छायामा परेका हुन्छन् उनीहरूका लागि प्लेटफर्म प्रदान गर्न खोजेका हौं । साथै सिनियर जुनियर दुवै कलाकारलाई जोड्न खोजेका पनि हौं ।”
जारी प्रदर्शनीमा आठ विभिन्न कलाको विधामा २८ कलाकारले आफ्नो कला देखाउनेछन् । यस कला प्रदर्शनीको सुरुवात फ्रिल्यान्सर फोटोग्राफर आकाश प्रधानबाट सुरु गरिएको हो । जसमा उनले फोटोलाई भिजुअल एक्सप्रेसन माध्यमको सहायता लिएका थिए ।
बुधबार, फागुन १२, २०७७ मा प्रकाशित
विदेशसम्म लोकप्रिय : यसरी बनाइन्छ जुजुः धौ (भिडियोसहित)
‘आई लभ यु सो मच मदनकृष्ण’ (भिडियोसहित)
कोरोनाका कारण अभिनेता सतिशको निधन
मुम्बई । महाराष्ट्रका दिग्गज अभिनेता सतिश कौलको निधन भएको छ । कोरोनाभाइरससँग लडिरहेका उनको शनिबार निधन भएको हो । कौरकी बहिनी... ८ घण्टा पहिले
काठमाडौं । लयमा फर्किन नपाउँदै पुनः सिनेमा हल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिन सुरु... १५ घण्टा पहिले
भक्तपुर । भक्तपुरमा जिल्लाव्यापी विद्यालय तथा कलेजस्तरीय कविता प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । सहिद राधेश्याम जोन्छे स्मृति प्रतिष्ठानले सो कविता प्रतियोगिताको... शनिबार, चैत २८, २०७७
राममणि रिसाल म चिनाऊँ, मन भएको तर धन नभएको निर्धन मान्छे । यस्तैको संसारमा बिचल्ली धेरै हुन्छ । ‘प्राध्यापन’को पेसाले उठाएको... शनिबार, चैत २८, २०७७
युवराज नयाँघरे भालेको डाकैमा छोडियो तिप्ल्याङ । राति सल्लाह सुनिएथ्यो, ‘मास्तिर गर्मी लागिसक्यो । भएका बाक्ला लुगा थान्कोमान्को लगाऔँ !’ तर, जति–जति बिहान... शनिबार, चैत २८, २०७७
काठमाडौं । हास्य कलाकार दीपकराज गिरीले केदार घिमिरे (माग्ने बुढा)लाई नाम अनुसारको स्वाभाव नभएको बताएका छन् । नाम माग्ने बुढा... शनिबार, चैत २८, २०७७